के यहोवाका साक्षीहरू जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउँछन्‌? | अक्सर सोधिने प्रश्नहरू
अहँ, हामी कसैलाई जबरजस्ती गर्दैनौं। हामीले यो कुरा हाम्रो मुख्य पत्रिका प्रहरीधरहरा-मा प्रस्ट पारेका छौं। त्यस पत्रिकामा यस्तो लेखिएको थियो, “मानिसहरूलाई धर्म परिवर्तन गर्न दबाउ दिनु गलत हो।” * हामी मानिसहरूलाई निम्न कारणले दबाब दिंदैनौं:
येशूले मानिसहरूलाई आफ्नो शिक्षा अँगाल्न कहिल्यै दबाब दिनुभएन। थोरैले मात्र उहाँको कुरा स्वीकार्नेछन्‌ भनेर उहाँलाई थाह थियो। (मत्ती ७:१३, १४) केही चेलाहरू उहाँको कुरा सुनेर ठक्कर खाँदा उहाँले तिनीहरूलाई जान दिनुभयो, जबरजस्ती आफ्नो पछि लाग्न दबाब दिनुभएन।—यूहन्ना ६:६०-६२, ६६-६८.
अरूलाई जबरजस्ती आफ्नो विश्वास परिवर्तन गर्न नलगाउनू भनेर येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाउनुभयो। मानिसहरूलाई मन नपरे पनि राज्यको सुसमाचार जबरजस्ती स्वीकार्न लगाउनुको साटो सुन्न इच्छुक मानिसहरूको खोजी गर्नू भनेर येशूले बताउनुभयो।—मत्ती १०:७, ११-१४.
जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न लगाउनु बेकार हो किनकि मनदेखि गरेको उपासना मात्र परमेश्वर स्वीकार्नुहुन्छ।—व्यवस्था ६:४, ५; मत्ती २२:३७, ३८.
के हाम्रो काम अरूको धर्म परिवर्तन गराउनु हो?
हामी “पृथ्वीको सबैभन्दा टाढा पर्ने इलाकामा” समेत बाइबलको सन्देश फैलाउँछौं भन्ने कुरा साँचो हो अनि हामी बाइबलले आज्ञा गरेबमोजिमै “जनसमक्ष र घरघरमा” गएर प्रचार गर्छौं। (प्रेषित १:८; १०:४२; २०:२०) सुरु-सुरुका ख्रीष्टियनहरूलाई जस्तै हामीलाई पनि कसै-कसैले कानुनविपरीत धर्म परिवर्तन गराएको आरोप लगाउँछन्‌। (प्रेषित १८:१२, १३) तर त्यस्ता आरोपहरू सबै झूटा हुन्‌। हामी कसैमाथि पनि आफ्नो विश्वास जबरजस्ती थोपर्दैनौं। बरु मानिसहरूले ज्ञान लिनु पाउनुपर्छ अनि सिकेअनुसार जीवनमा लागू गर्ने निर्णय उनीहरू आफैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छौं।
हामी मानिसहरूलाई धर्म परिवर्तन गर्न जबरजस्ती गर्दैनौं अनि धर्मको नाममा कुनै राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न हुँदैनौं। अथवा आर्थिक सहयोग गरेर वा समाज सुधारका कामहरू गरेर नयाँ सदस्यहरू बढाउन चाहँदैनौं। तर आफूलाई ख्रीष्टियन भनेर चिनाउने कसै-कसैले यसो गरेको छन्‌ र यस्तो काम गरेर ख्रीष्टको अनादर गरेका छन्‌। *
के कुनै मानिससित धर्म परिवर्तन गर्ने अधिकार छ?
भविष्यवक्ता अब्राहामले आफ्नो नातागोताको धर्म त्यागे
छ। धर्म परिवर्तन गर्ने अधिकार मानिसहरूसित छ भनेर बाइबल बताउँछ। बाइबलमा त्यस्ता थुप्रै विवरण पाइन्छ जसमा मानिसहरूले आफ्नो नातागोताले मान्दै आएको धर्म छोडेर साँचो परमेश्वरको उपासना गर्ने निर्णय गरेका छन्‌। अब्राहाम, रूथ, एथेन्सका केही मानिस अनि प्रेषित पावल तिनीहरूमध्ये केही हुन्‌। (यहोशू २४:२; रूथ १:१४-१६; प्रेषित १७:२२, ३०-३४; गलाती १:१४, २३) साथै बाइबलमा त्यस्ता विवरणहरू पनि पाइन्छ जसमा मानिसहरूले परमेश्वरको उपासना नगर्ने गलत निर्णय गरेका थिए।—१ यूहन्ना २:१९.
धर्म परिवर्तन गर्ने अधिकारलाई मानव-अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले समर्थन गरेको छ। यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघले “अन्तरराष्ट्रिय मानव-अधिकार कानुनको जग” भनेको छ। त्यस दस्ताबेजअनुसार प्रत्येकसित “आफूले रोजेको धर्म वा आस्था परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रता” छ अनि धर्मलगायत अन्य विषयमा “सूचना र विचारहरू प्राप्त गर्ने, खोज्ने तथा प्रसार गर्ने स्वतन्त्रता” छ। * यस्ता अधिकारहरूले आफ्नो आस्थाअनुसार चल्ने अनि सहमत हुन नसक्ने धारणालाई तिरस्कार गर्ने अरूको अधिकारको कदर गर्न लगाउँछ।
के धर्म परिवर्तनले परिवारको रीतिथिति वा संस्कारको अनादर गर्छ?
गर्दैन। जुनसुकै धर्म माने पनि बाइबलले सबैलाई आदर गर्न भनेको छ। (१ पत्रुस २:१७) साथै यहोवाका साक्षीहरू आफ्नो आमाबुबालाई आदर गर्नू भन्ने बाइबलले दिएको आज्ञा पालन गर्छन्‌। आमाबुबाले बेग्लै धर्म माने पनि तिनीहरूलाई आदर गर्छन्‌।—एफिसी ६:२, ३.
तर सबैले बाइबलले बताएझैं बेग्लै धर्म मान्ने मानिसको आदर गर्दैनन्‌। जाम्बियामा हुर्केकी एक जना स्त्रीलाई विचार गरौं। उनी भन्छिन्‌, “म हुर्केको समाजमा कसैले धर्म परिवर्तन गऱ्यो भने उसलाई अवफादार अर्थात्‌ आफ्नो परिवार र समाजलाई धोका दिने व्यक्तिको रूपमा हेरिन्थ्यो।” उनले पनि यस्तै परिस्थितिको सामना गर्नुपऱ्यो। उनले किशोरावस्थामा छँदा यहोवाका साक्षीहरूसित बाइबल अध्ययन गरिन्‌ अनि पछि आफ्नो धर्म परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिन्‌। उनी भन्छिन्‌, “मैले आफ्नो आमाबुबालाई असाध्यै दुःखी बनाएको अनि उहाँहरूको चित्त दुखाएको कुरा उहाँहरू बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो। यसको सामना गर्न मलाई धेरै गाह्रो भयो किनभने मलाई उहाँहरूको साथ चाहिन्थ्यो। . . . धार्मिक परम्पराप्रति नभई यहोवाप्रति * वफादार रहनुको अर्थ मैले आफ्नो परिवारलाई धोका दिएकी होइन।”
^ अनु.2जनवरी १, २००२ अङ्‌कको प्रहरीधरहरा-को पृष्ठ १२, अनुच्छेद १५ हेर्नुहोस्।
^ अनु. 8 उदाहरणको लागि, सन्‌ ७८५ तिर चार्लमेनले एउटा उर्दी निकाले। सेक्सोनीका कुनै मानिसले बप्तिस्मा गरेर ख्रीष्टियन बन्न इन्कार गरेमा त्यस व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिइने कुरा त्यस उर्दीमा उल्लेख गरिएको थियो। साथै सन्‌ १५५५ मा पवित्र रोमी साम्राज्यमा युद्धरत पक्षहरूले अक्स्बर्कको शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। पवित्र रोमी साम्राज्यका शासक रोमन क्याथोलिक वा लुथरानमध्ये एउटा हुनुपर्छ अनि जनताले आफ्नो शासकको धर्म अँगाल्नुपर्छ भनेर त्यस सन्धिमा जोड दिइएको थियो। तर आफ्नो शासकको धर्म अँगाल्न नचाहनेहरू अर्कै देशमा सर्नुपर्थ्यो।
^ अनु. 11 यस्तै अधिकार यी बडापत्रहरूमा समावेश गरिएका छन्‌: मानव-अधिकार तथा मानिसहरूको अधिकारसम्बन्धी अफ्रिकी बडापत्र, आसियन (दक्षिण-पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्‌गठन), मानव-अधिकार घोषणापत्र, मानव-अधिकारसम्बन्धी युरोपेली महासन्धि, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय घोषणापत्र, अमेरिकन डिक्लेरेसन अफ द राइट्‌स एन्ड ड्युटिज अफ म्यान र 2004 अरब चार्टर अन ह्युमन राइट्‌स। यस्तो अधिकार दिएको दाबी गर्ने राष्ट्रहरूले समेत आफ्नो दाबीअनुसार नगरेको पाइएको छ।
^ अनु. 14 बाइबलअनुसार यहोवा साँचो परमेश्वरको नाम हो।
सबै मानिसहरू एक मात्र साँचो परमेश्वरको उपासनामा एकताबद्ध हुने समय कहिल्यै आउला?